Shiinaha Shiinaha 100% minaarado dhaadheer oo warshadeysan iyo waxsoosaarayaasha | Ruisheng
Waxaan nahay warshad soo saar xirfadle ah. Waxaan soo saareynaa tiro badan oo dhar jeex jeexan oo ragga ah gudaha iyo dibadaba, maxaa yeelay waxaan heysanaa agab wanaagsan, naqshad wanaagsan iyo qalab wanaagsan. Hadaad ubaahantahay alaabooyin gaar ah, markasta waad nala soo xiriiri kartaa si aad u ogaato samballada iyo oraahda ugu dambeysay
Nooca Qaabka Daabac
Koolar Kuwa kale
Dhererka Dhererka buuxa
Xilliga Dayrta, Guga, Xagaaga
Dhererka Gacanta (cm) Buuxda
Nooca saadka Alaabta Kujira
Waxyaabaha suuf, Wax la codsaday
Nooca Weelka Duub
Farsamada La daabacay
Magaca Astaanta RUISHENG \_ OEM
Nooca Nooca Pajamas
Dhoofinta Gaarsiinta Degdega
MOQ Aqbal Imtixaanka Yar
Adeeg OEM ODM OBM
Fiiro gaar ah: Qiimaha waxaa loogu talagalay alaabooyinka caadiga ah, haddii aad rabto habeyn dheeraad ah, fadlan riix Nala soo xiriir!
1. Dhammaan weydiimaha iyo su'aalaha waxaa looga jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood.
2. Heerka tayada oo ay kujirto heerka xirxirida ayaa ugu fiican uguna xasilloon.
3. Xaaladaha lacag bixinta ugu fiican.
4. Aqbal cabirka caadada, astaanta gaarka ah, astaanta iyo xirmada!
1. Intee in le'eg ayaan heli karaa jawaab-celinta kadib markaan dirnay baaritaanka?
Waxaan kugu soo jawaabi doonaa 12 saacadood gudahood maalmaha shaqada gudahooda.
2. Ma sameyn kartaa naqshadeena?
Dabcan, naqshadeyntaada kartoo (OEM / ODM) ayaa la heli karaa.
3. Miyaad u sameyn kartaa qaabeynta xirmada?
Haa, fadlan noo soo dir naqshadda aad u baahan tahay, waan qiimeyn doonnaa qiimaha oo waxaan ka dhigi doonnaa xirmo isku mid ah oo ku saleysan naqshadeyntaada. Ama sidoo kale waxaan haynaa xirmooyin loogu tala galay tixraacaada.
4. Waa maxay wakhtiga guud ee hogaaminta adduunka ee dalbashada?
Wax soosaarka yar: 3-4 maalmood Wax soosaar ballaaran: 7-15days ama ku saleynaya qty-gaaga.
5. Maraakiib noocee ah ayaad haysaa?
DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, iwm.
6. Maxaad naga heli kartaa?
Alaabooyin heer sare ah (naqshad gaar ah, mashiin daabicis ah, kontorool tayo sare leh) Iibka warshadda tooska ah (qiime wanaagsan oo la tartami karo) Adeeg heer sare ah (OEM, ODM, adeeg iibka kadib, si dhakhso leh)
Hore: Xirfadleyda muruqmaalaha dharka oo waara oo si fudud loo nadiifiyo
Xiga: Ragga suufka ah Polo Shirt Dharka Dugsiga Polo Embroidery School Badge Polo T-Shirt